Uzenza njani iintolo kwiAdobe Photoshop | Abadali be-Intanethi
Uzenza njani iintolo kwiAdobe Photoshop
Iris Gamen | 26/03/2022 20:30 | Amaqhinga
Inkqubo, iAdobe Photoshop ayidityaniswanga kuphela kuhlelo lwemifanekiso okanye iifoto, kodwa i inkqubo eya phambili, ngoluhlu olubanzi lwezixhobo zokwenza imifanekiso ukusuka ekuqaleni. Akukho mfuneko yakuzitshixa kulo mbono, ukuba yinkqubo yokuhlela kuphela, iPhotoshop inamanyathelo amaninzi ngaphambili.
Ngubani ongazange enze umboniso okanye ahlele ezinye iifoto kwaye kufuneka agxininise into ebalulekileyo kwaye engazi ukuba njani? Ezinye iingxaki zinesisombululo esilula, kwaye kule meko siza kukwenza oko, sikuncede ukuba wenze njalo zikufundisa ukwenza iintolo kwiAdobe Photoshop.
Utolo, yenye ye ezona zinto zilula kwaye zisetyenziswa xa kuqaqambisa into nakweyiphi na indlela. I-Adobe Photoshop iqulethe isixhobo esiya kwenza ukongeza iintolo zibe lula kangangoko.
1 Uzoba njani umhla kwi-Photoshop inyathelo ngenyathelo
2 Iindidi zeentolo kwi-Adobe Photoshop
3 Unokwenza njani utolo olugobileyo kwi-photoshop
Uzoba njani umhla kwi-Photoshop inyathelo ngenyathelo
Iimilo ezingagqibekanga ze-Adobe Photoshop zikuvumela ukuba usebenze ngendlela elula kunye neemilo ezahlukeneyo kunye nezinto zegraphic eziya kuba luncedo kuyilo lwakho. I isixhobo samanani okanye iifom, yenye yezona zinto zibalulekileyo kwaye zisetyenziswa kakhulu kwinkqubo exeliweyo.
Photoshop ine iintlobo ezincinci zeemilo eziza kumiselwa kwangaphambili. Kodwa unethuba lokuzandisa, ukongeza ezintsha ezenziwe ngabanye abayili okanye nguwe.
La isixhobo somgca, sesona siza kusivumela ukuba sikrwele umgca, Xolela ukungafuneki, kwiseyile yethu, zombini iintolo kunye nemigca ethe tye.
Inyathelo lokuqala ekufuneka silithathe kukukhetha kwibar yethu yesixhobo, ebekwe kwicala lasekhohlo lesikrini, ukhetho lweemilo, kunye ne icon yesikweri.
Siza kuhlala sicinezele imizuzwana embalwa kwaye i-drop-down izakuvela ngokwahlukileyo iimilo zejometri esinokuzoba, kwaye siya kukhetha isixhobo esinemilo yomgca.
Emva kokuba sinesixhobo esikhethiweyo, kufuneka senze chaza ububanzi bomgca.
El Ubukhulu becala lomgca, singayilungisa ngokuya kwibar yesixhobo ephezulu, khetha ukhetho lokubetha. Kuya kufuneka sichaze ububanzi bomgca kwibha yeenketho ezikhankanyiweyo.
Elinye icebiso esikunika lona kukuqinisekisa cwangcisa isicwangciso sokulungelelanisa sokhetho lweploti, kwindlela egcweleyo okanye engaphandle. Oko kukuthi, ukuba ubukhulu bomgca bumiselwe ukuzalisa, abuyi kubonakala.
Enye yeendlela ezikhoyo zokuchaza ubukhulu bobubanzi bomgca, ngokusebenzisa ibha yokukhetha, apho ibonisa khona okanye ngaphandle komzobo.
Njengoko ubona kulo mfanekiso, kwi isikwere esibomvu sichaza ububanzi bomgca, kwaye kwisikwere se-orange sisebenzisa ubukhulu ukuseta ububanzi.
Inyathelo elilandelayo esiza kulithatha yabela umbala kumgca. Ukwenza oku, siya nqakraza kumgca, kwaye siya kwibar yokukhetha ephezulu kwaye kwicandelo lokuzalisa, iwindow yesampula iya kuvula apho siya kukhetha umbala osifanelekelayo.
Sele sinomgca owenziweyo, ngoku kufuneka sigqibe ngokwenza utolo lwethu.
Kwibar yokukhetha ephezulu, apho siye saqwalasela ukwakheka kunye nombala, siya kubona ngasekunene a nut icon. Ukuba sicofa kulo mfanekiso, imenyu yokuhla ivela apho unokubona khona ukhetho lokubandakanya iintloko zotolo, ekuqaleni okanye ekupheleni.
Sikhetha eyona ifanele thina ukukhetha into esiyifunayo kumsebenzi wethu. Kwimeko yethu, siya kubonisa ukhetho lokuqala lomgca.
Ngolunye ukhetho oluthathu kule menyu, ungatshintsha incam yotolo, uyenze ibe nde, incinci okanye igobe. Kwicandelo elilandelayo sikubonisa zona.
Iindidi zeentolo kwi-Adobe Photoshop
Njengoko sibonile ngokhetho lweengcebiso zomhla, sinokwenza izinto ezahlukeneyo ezahlukeneyo.
Ukuba sifuna ntoni Umgca othe ngqo, kuya kufuneka sikhethe kuphela isixhobo seemilo, khetha umgca kunye neseti yonke.
Kwelinye icala, into esiyikhangelayo kukuba a utolo olunenqaku kuphela ekupheleni, kuya kufuneka senze umgca wethu othe tye kwaye kwiinketho zentloko yetolo ezibonisiweyo, khetha icandelo lesiphelo.
Endaweni ewe sifuna ingcebiso ekuqaleni, ukhetho esiya kulwamkela kukuba, ukuqala. Okanye ukongeza iingcebiso kumacala omabini, ukhetha zombini iinketho.
Kwakhona, sinokufikelela iindlela ezahlukeneyo iintolo ukuba sidlala iinketho ububanzi, ubude kunye concavity. Ngabo, sinokwenza iintolo ezineengcebiso ezityebileyo, iintolo ezineengcebiso ezinde okanye ezinobugophe obukhulu.
Unokwenza njani utolo olugobileyo kwi-photoshop
Njengoko kwimeko echazwe ngasentla, siya kudala utolo lwethu kwisixhobo seemilo, kwaye ukhethe ukhetho lomgca.
Nje ukuba utolo lwethu luyilwe, kunye ne isixhobo somgca sisakhethiweyo, siya kucinezela amaqhosha e-ctrl kunye nonobumba u-t, guqula umyalelo. Kwaye kwibar yokukhetha, siya kukhetha enye ye inguqu yasimahla kunye nokuguqulwa.
Inyathelo elilandelayo kukucofa kwi ukhetho lwewarp kwicala lasekhohlo lebar yeenketho. Uluhlu lweemilo oluya kuthatyathwa lutolo lwakho luya kuvela. Kwimeko yethu sibonise ukhetho lwevault.
Ngale nto inguqu yasimahla kunye nokhetho lwewarp, unganika izinto zakho zoyilo inkangeleko eyahlukileyo, ukubanika iimilo ezigobileyo, iimilo zamaza, ukucutha, njl.
Njengoko ubonile, ukwenza iintolo kwi-Adobe Photoshop ngumsebenzi olula kakhulu. Kuphela kunye uncedo lwesixhobo somgca kunye nokhetho olunikezelwe kuthi, sinokwenza imizekelo eyahlukeneyo yeentolo, ngokweemfuno zakho.
I-Adobe Photoshop yinkqubo apho unokukhohlisa kwaye uhlele ifoto ngeendlela eziliwaka ezahlukeneyo. Kodwa, ngelixa abanye bahlala bebambelele kulo mbono. Abanye basebenzise amathuba anikezelwa yile nkqubo ukuba bawayile uyilo olunamabhongo kakhulu, olumi ngaphandle kwezinye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amaqhinga » Uzenza njani iintolo kwiAdobe Photoshop
Yiyiphi imbali efihla uphawu lweDoritos